Hitan'ny mponina ny fomba fiasan'ny Ellicott 370 Dredge - Blog Ellicott Dredges
Jereo ny fomba fiasan'ny Dredge (Ellicott® 370)
Jolay 1, 2011
MOSES LAKE - Mponina sy olo-manan-kaja 50 eo ho eo ao amin'ny Lake Lake no nizotra tamina fiakarana mitresaka mba hahitana antsanga nopotsahana avy tao amin'ny farihy tao anaty dobo mitazona.
Fantsona lehibe iray miainga avy amin'ny farihy mankany anaty dobo iray, manary rano.
Niova ho mazava sy maizina ny lokon'ny rano, nanomboka naka sary ny mpijery sasany handraketana ny fomba fiasan'ny teknolojia.
Manongotra, mampiasa an Ellicott Dragon Dredge 370, natomboka tamin'ny fomba ofisialy 1 Jolay 2011 izay voalohany Moses Lake hanatsarana kalitao rano.
Ny Distrikan'i Mosesy Lake Irrigation and Rehabilitation dia nanasa ny vahoaka amin'ny fihetsiketsehana ny alatsinainy mba hahafantatra bebe kokoa momba ilay tetikasa.
Mary Conrow, avy any amin'ny Lake Moses, dia iray tamin'ireo mpijery. Nanatrika ny hetsika izy satria ny vadiny dia "tena liana" tamin'ny fizotran'ny asa drakaka ary nanana fanontaniana.
Mponina iray hafa, Ed Buchmann, 93, dia nilaza fa mpisava lalana mpiompy Neppel izy ary liana ny hahita an'io fizotran-javatra io.
Talohan'ny fihetsiketsehana, ny Rep. Bill Hinkle, R-Cle Elum, dia nantsoina hoe “tetik'asa ho an'ny fiarahamonina” ity fanodinana ity, miaraka amina adihevitra be, ezaka ary na volam-panjakana aza hanatanterahana izany.
Ilay tetik'asa dia "ny zanakao tokoa ary ny ho avin'i Moses Lake," hoy i Hinkle.
Ny Repoblika Judy Warnick, R-Moses Lake, dia nilaza fa tsy vaovao ny fitantanana ny Lake Lake, satria efa nanomboka ny taona 1928.
Ny vaovao dia ny fitsipika, ny karazana manafika ary ny fampiasana fialamboly vaovao, hoy izy nanamarika.
"Heveriko fa ianareo rehetra dia nahavita asa lehibe tamin'ny famitana io teboka io," hoy i Warnick tamin'ny ampahany. "Mahatonga an'ity tany ity ho faritry ny tany efitra i Moses Lake."
Nantsoin'ny ben'ny tanàna Lake Lake Jon Lane hoe iray amin'ireo firavaka ao amin'ny satroboninahitry ny tanàna io farihy io.
Ho enti-miverina mamerina ilay farihy ny tetik'asa fanondrahana, hoy izy.
Niarahaba ny rehetra iamatoa niaraka tamin'ny tetikasa i Lane.
I Miss Moses Lake Audrey Ramsden dia niantso ilay tetikasa ho zavatra mahaliana ho an'ny fiarahamonina ary nilaza izy fa voninahitra lehibe ny manatrika an'io hetsika io.
Ron Covey, filohan'ny talen'ny distrikan'ny fanondrahana, dia nisaotra ny mpandraharaha ao amin'ny Lake Lake Pamp Maiers noho ny famelana ny distrika hampiasa ny fananany ho an'ireo dobo sedimentation, ny mpikambana ao amin'ny birao Richard Teals sy Glen Rathbone ary ny talen'ny Norm Benson sy Rich Archer ankehitriny, ary ratepayers.
Nandritra ny fotoan'ny fanontaniana sy ny valiny, nanontany i Harlan Beagley, mpamoaka boky any Columbia Basin Herald raha nanontany ny fisehoan'ity ririnina ity ny fisehoan'ny fantsom-bary milentika any akaikin'ny farihy.
Ny biology Ryan Walker, ao amin'ny Grette Associates Environmental Associates, dia nilaza fa hisy ny fiovana, miankina amin'ny famokarana ilay dredge.
Tsy hisy ny sediment miorina eo amin'ny trano amin'ny haavo ankehitriny, hoy i Walker.
Nanontany i Warnick fa misy fiantraikany amin'ny trondro ilay trondro ary raha afaka mandositra ny fisintahan'ny banga izy ireo.
Tsy dia avo ny hafainganam-pandehan'ilay banga ary antenaina hihatsara ny toe-trondro, hoy i Glen Grette, biolojika zokiny sy talen'ny orinasa an'ny Grette Associates Environmental Associates.
Nanontaniana ihany koa ny halalin'ny fametrahana ny dreded.
Walker dia nilaza teo anelanelan'ny tongotra 8 sy 20 tongotra.
Tamin'ny faran'ny hetsika dia nanolotra an'i Curt Carpenter, talen'ny Distrikan'i Irrigation sy Rehabilitation an'i Moises Lake, i Curt Carpenter, Vision 2020, ho loka ho an'ny tetikasa.
Navoaka indray avy tao amin'ny Columbia Basin Herald
Atombohy miaraka amin'i Ellicott ny tetikasan'ny Maintenance Lake anao